Kulan looga hadlayey dhalinyaradda kooxaha xagjirka ah ku biira oo Stockholm lugu qabtay | Somaliska
Hey’adda Qarammadda Midoobey u qaabilsa horumarinta ee UNDP, ayaa kulan ay qabatay magaaladda Stockholm ee caasimadda Iswiidhan kaga hadashay warbixino la xirriirta dhalinyaradda iyo ku biirista kooxaha xagjirka ah.
Kulankan ayaa wararku sheegayaan in uu ahaa mid lugu gorfeeynayey sida loo qaaxi lahaa xagjinimadda, Maxamed Yaxye ah iskuduwe u qaabilsan qarammadda Midoobeey laanteeda horuminta ee UNDP-da ee fadhigeedu yahay rajiimka Itoobiya ayaa idaacadda afka soomaaliga ee raadiyo Iswiidhan u sheegay in warbixinadda ay soo bandhigeen ahaa siddii lugu ogaan lahaa waxbaayabaha la is oran karro waa u sabab in dhalinyaraddu ku biirto kooxaha xag jirka ah, iyo siddda ay kooxahan xag jirka ahi saameeyn weeyn ugu yeeshaan qaaradda Afrika.
Dhina kale tan iyo markii ay soo if baxeen kooxaha xagjirka ah ee Alqaacida iyo Daacish iyo falalkooda guracan, waxaa caalamka labaatankii sanno ee ugu dambeeyey gaar ahaan Qaaradda Madoow ka buurmay kooxo islaamiyiin ah oo taabacsan kooxahaasi xagjirka ah sida Alshabab . iyo kooxda Boko Haram ee Afrikada Galbeed.
Maxamed Yaxye, waxaa uu sheegay in wareeysiyo kala duwan oo lala yeeshay dhalinyaraddaasi qaarkood ka soo baxay kooxaha xagjirka ah ay u muujisay ku biiritaanka kooxahan inaan aannu habeen qura ku iman ee safar waxyaabo badan ama cunsuro ku jiraan.
“Sawirka nooga soo baxay ayaa ah in aanay ka mid noqoshada ururrada xag-jir-nimadu aheyn mid habeen qura ku dhaca. Waa safar ey ku jiraan cunsurro badan. Waxaa ka mid ah heerkaaga tacliineed, xiriirka aad maamulka la leedadahay ama fikirka aad ka qabto, xaaladaha ku hareereey-san ee fikrka diinta aad ka qabto” ayuu yiri Yaxye oo hadana intaas hadalkiisa ku daray.
“In qaar badan ee ka mid ah dadyoowga ku biirey ururrada xag-jiriinta ey sheegeen iney ugu wacnayd diinta, hase yeeshee aaney aqoon ballaaran u laheyn diinta amaba ahaayeen dad aan wax qorin, waxna akhrin. In xag-jir-nimadu xiriir ku leedahay diinta. 57% dadka aannu wareeysanney aaney garansaneeyn xiriirka diintu la leedahay ama wax yar ka ogsoonaayeen”.
Arrimmaha kale ee war-bixintu wax ka eegtay ayey ka mid ahaayeen noloshii carruur-nimadooda, xiriirka ka dhexeeya shakhsiga iyo dawladda, maamul wanaagga iyo sida loo dhowro xuquuqda bani’aadamka ee bulshada maamulkaa hoos timaada. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu dambeeya ee shakhsiga ku riixa xag-jir-nimada ayey ka mid ahayd in maamulka jiraa uu meel kaga dhaco xuquuqda bani’aadamka. Horraantii qarniga eynu maanta ku jirno ayaa dhacdooyinka qaraxyada ee qaaradda Afrika lagu astaameeyn jirey dagaalkii sokeeye ee ka socday dalka Al-jeeriya.
“Hase yeeshee iminka dhacdooyinka argagixisada ee lagu beegsado bulshada rayidka ey maalin walba ka dhacaan, iyada oo maanta qudheeda oo war-bixintan lagu soo ban-dhigeyo Stockholm qarax baabuur lagu beegsaday magaalada Muqdisho. Maalin walba waxay kooxahaasi beegsadaan bulshada rayidka, dadka fukharada ah, dadyoowga tabarta daran ee halganka kula jira nolosha.
“Iyada oo waddammada sida Soomaaliya ey haweenku iyo carruur badani ku fekeraan maalin walba ma aadaa suuqa bakaaraha si aan wax ugu iibsado aan ilmaha ku quudiyo oo waxaan u bareeraa geeri. Waxey ku jiraan kala doorasho geeri iyo nolol. Xitaa waxey ka cabsi qabaan masaajiddii lagu cibaadeey-san lahaa. Ma tagaa masjidka oo ma ku soo tukadaa?
“Kooxahani waxay tijaabo ku yihiin nolosha iyo bani’aadmi-nimada. Waa midda aanu dooneeyno inaannu wax ka ogaanno. Maxaa ku qasba dhallin-yaro isla magaalada ka soo jeedda oo ku barbaartay iney ku biiraan kooxahaa” ayuu yiri Maxamed Yaxye oo . ah howl wadeen ka tirsan laanta UNDP ee Qarammadda Midoobey.
Xildhibaanadda gollaha deegaanka ee gobolka Karlstad oo ka doodaya masaajid muslimiintu yeelato oo halkaas laga dhiso